Maitiro ekuisa Caliber 3.16 pane chero GNU / Linux kugovera | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekuisa Caliber 3.16 pane chero GNU / Linux kugovera
Joaquin Garcia | | General, Zvirongwa
Iyo inozivikanwa yeCaliber ebook maneja rave kufarirwa kwazvo zvekuti dzinenge zvese kugovera dzine chirongwa ichi mumahofisi avo epamutemo. Asi ichokwadi kuti hazvisi zvese zvinogoverwa zvine yazvino vhezheni yeiyi ebook maneja. Kuve kana kusave neyazvino vhezheni kunogona kureva kuti eReader yedu inoshanda nemazvo kana kwete, pamwe nemabasa matsva kana mabugs aivapo kare kwete kwete izvozvi.
Ndosaka tichizokuudza maitiro ekuisa Caliber 3.16, yazvino vhezheni yeiyi inozivikanwa ebook maneja. Iyo vhezheni ichiri kuenderana nezvose zvinopihwa zveGnu / Linux pamwe nemamwe mapuratifomu akadai seMacOS, inotakurika Windows. Uye zvakare inovandudza mashandiro ayo eseva anotibvumidza kumhanya nekutarisira raibhurari yedu kuburikidza newebhusaiti.
Caliber 3.16 inobvumidza iwe kubata maebook ari kure nekutenda kuseva
Caliber 3.16 inogona kuwanikwa nekutevera mirairo inokurudzirwa nechikwata chekuvandudza. Kune izvi isu tichazoda izvo kugovera kwedu kune wget uye python. Kazhinji, iyo yekupedzisira inayo asi wget haiwanzo kuuya mune kumwe kugovera, mune izvo kesi isu tichafanirwa kuiisa kare. Kana tangove nezvose, isu tinovhura terminal uye tinyore zvinotevera:
Mushure mekumanikidza kupinda, kugovera kwedu ichatanga kurodha zvirimo uye mapakeji anodikanwa ekumisikidza pane iyo Gnu / Linux kugovera. Zvichienderana nekumhanya kwekubatana, kumisikidza kunotora maminetsi mashoma kana zvakadaro. Iwo wekuraira unochengeta zvese uye isu tichava nezvose zvakaiswa kana wapedza. Kunyangwe isu tichifanira kutaura kuti mushure mekutanga chirongwa wizard ichatanga kutibatsira nekugadzirisa. Pakati pemibvunzo ivo yavanotibvunza isarudzo yeReader, chimwe chinhu chakakosha uye kuti isu tinofanirwa kunyatsoita mhinduro yavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Maitiro ekuisa Caliber 3.16 pane chero GNU / Linux kugovera
Ndatenda zvikuru nekuda kweichi posvo, chaive chakakosha nekuti nekuda kwechimwe chikonzero chisinganzwisisike ini handina kukwanisa kuisa caliber uye neterminal zvaive nyore, maita basa.
OpenSUSE Dzidzo ichanyangarika mushure mekuvhuraSUSE Leap 15